China Microwave Heated Conditioning Gel Cap ifektri abakhiqizi | UHuanyi
Izinto Zangaphandle: Inayiloni ehlanganiswe ne-pvc, imibala ethandwayo etholakalayo i-tiffany eluhlaza okwesibhakabhaka, epinki, emnyama, amaphethini jikelele angaphrintwa kumshini wethu we-UV.
Usayizi: usayizi oguqukayo (ungenziwa ngezifiso ukuze uvumelane nosayizi ohlukile we-headwrap)
Usayizi: usayizi oguqukayo (ungenziwa ngezifiso ukulingana nosayizi ohlukile wokubhalwa kwekhanda)
Kungani udinga le cap?
Ivumela ukwelashwa kokulungisa ukondla ngokujulile, ukungena nokufaka umswakama kushaft yangaphakathi yezinwele
Kulula ukuyisebenzisa, ukushisa nje kwi-microwave, ukugqoka ikepusi lokugeza kungaba ngcono kunokugqoka nje le cap evuthayo yejel.
Azikho izintambo, awekho ama-plugs. Kuphephile ukusebenzisa ekamelweni lokugeza nakuyo yonke indlu
Kulula ukuwasha nokunakekela.
Kwenziwe ngekhwalithi ephezulu yeSilica Gel neNylon
1.Ukuhlangenwe nakho Kweminyaka eyi-10 kwe-OEM, i-ODM, umbala owenziwe ngokwezifiso, ilogo, amaphakheji. Ingakunika iziphakamiso zobuchwepheshe ekusetshenzisweni nasekugcinweni, ukugwema ukuvuza noma isikhutha.
2.Ifekthri inemigqa engaphezu kwengu-20 Yokukhiqiza, umshini wokuphrinta we-UV, indawo yokusebenzela yeSilkscreen ingahlangabezana nezidingo zakho kulogo, siphinde senze inkambiso yomsebenzi ngokwethu singakwazi ukupakisha isigqoko sakho ngokusobala.
4.Ukuthi lawo majita we-cap ashubile usayizi omncane angaqina kakhulu enza ungakhululeki, ifektri yethu inezinhlobonhlobo ezinkulu zosayizi owukhethile, inganela abantu abaningi. Ungasitshela futhi okuhle ukukwenza kube yimikhiqizo emisha yangempela.
Langaphambilini inja yokupholisa umata
Olandelayo: Iphakethe lokusiza le-Migraine
Ukujula Okujulile kwe-Heat Cap
Ikepisi lemvume yezinwele
ikepisi lokusakaza izinwele
Ukushisa iGel Cap
ikepisi lezinwele zokulala
I-gel cap eyomile
I-gel eshisayo i-cap evuthayo